Hiran State - News: wakiilka Hiiraan State ee Uk oo ay si weyn u so dhaweeyeen jaliyada Hiiraan ee Uk kadib.
wakiilka Hiiraan State ee Uk oo ay si weyn u so dhaweeyeen jaliyada Hiiraan ee Uk kadib.
HS:-Wakiilka Hiiraan State ee Uk oo ay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabistiisa jaliyada Hiiraan ee Uk kadib.
Dalka Ingiriiska waxaa ku nool jaaliyada ugu badan ee reer Hiiraan ka joogta qurbaha waana wadan ay ku nool yahiin Somali badan oo siweyn u soo dageen waxii ka danbeyey bur burkii Somaliya ka dhacay tan iyo 1988kii oo ah markii ay dalka Somaliya ka curteen dagaalada sokeeye oo xiligaasi ka bilaawday gobolada waqooyi ee Somaliya amaba dhulka maaanta loo yaqaano Somaliland.Marka laga soo tago Somalida wadankaasi ku nool waxaa iyadana xusid mudan in ay ku nool yahiin jaaliyada ugu badan ee reer Hiiraan ka joogta qurbaha, waxaana halkaasi dhawaantan loo magacaabay wakiilka rasmiga ah ee dowlad goboleedka Hiiraan State u fadhiya dalkaasi oo ah nin dhalinyaraa laguna magacaabo Cismaan Raage Saney.
Osmaan Raage intii aan xilkaan loo magacabin waxuu ka mid ahaa dhalinyarada reer Hiiraan ugu firfircoon kaalin muuqatana ka qatay dhismahii, dhiiragelintii iyo waliba taagero joogto ah oo uu iskiis ugu fidiyey maamulka kaliya ee ay shacabka Hiiraan dhisteen kuna yimid rabitaankooda kaasi oo ah midka kaliya ee maanta heysta taageerada ugu badan ee bulshada Hiiraan marka laga hadlayo maamul doonaya nidaam iyo kala danbeyn u horseedi kara shacabka Hiiraan.
Cismaan Raage waxuu ka bilaabay dalalka bariga Africa shirar badan oo lagu wacyi galinyo qeybaha kala duwan ee reer Hiiraan isagoona shirkii ugu weynaa ku qabtay dalka Ethiopia oo uu iskugu keenay dhamaanba waxgaradka, dhalinyarada iyo haweenka jaaliyada Hiiraan ee halkaasi ku noolaa iyagoo shirar badan kadib siweyn u soo dhaweeyey dowlad goboleedka Hiiraan State iyo masuuliyiintooda.
Inta badan qaabka dowlad goboleedka Hiiran State ay u taageeraan shacabka Hiiraan waa dhawr nooc dadka qaarkood waxey u taageeraan armaad xil ka qabataa. qaar kale waxey u taageeraan si ay u ogaadan meesha ay wax u marayaan maamulka iyo howlahiisa iyagoo ku xiran kooxaha wadanka ka wada dagaalka sida Shabaab iyo wax la mid ah qaarne xil haka hayeen amaba yeyesan ka heynin iyagu waxey maamulka ku taageeraan qadiyad oo markasta dadaalkoodu waa joogto.
Sida aad ku aragto muuqaalka mid ka mid ah nabadoonada reer Hiiraan ooku labisan funaanad ay ku wasiran tahay amaba kuqoran tahay magaca Hiiran State taasi oo ka turjimeysa in bulshada Hiiraan uu ugufadhiyo magaca Hiiraan State qiimo weyn iyagooaaminsan in magacani uu noqon doono midka Hiiraan ka shaqeyn doona xitaa hadii maamulka ahda jira la bedelo.
Marka Cismaan Raage isagu xilkaan ma doonaan mana raadsan waa garasho ay u garteen masuuliyiinta HS oo uu ugu horeeyo madaxweynaha taasi oo keentay inuu kasbado jaaliyadii uu la noolaa ee Uk oo maalmahani dhambaalo kala duwan u soo direysay wakiilka cusub ee Uk u fadhiya HS.jaaliyada ayaa isku diyaarineysa xaflad ay isku baranayaan iyaga iyo wakiilka Uk halka xafiis joogto ah oo uu wakiilka ka howl gali doono lagu wado in laga furo halkaasi isagoo noqon doona masuulka kaliya ee magaca HS ee Uk ku hadlidoona marka ay noqoto ka hadalka arimaha HS ee UK.
La soco wararkeena danbe ee wakiilka iyo jaaliayda Hiiraan ee Uk.
· admin on November 10 2011 10:45:48 · 0 Comments · 2536 Reads ·
14,569,469 unique visits